In ka badan 20 qof oo ku dhimatay diyaarad rakaab ah oo ku burburtay dalka Kongo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta In ka badan 20 qof oo ku dhimatay diyaarad rakaab ah oo...
In ka badan 20 qof oo ku dhimatay diyaarad rakaab ah oo ku burburtay dalka Kongo
Goma (Halqaran.com) – Shaqaalaha gurmadka ayaa 18 mayd ka soo qaaday meel qashinqubka ah, kaddib markii diyaarad ku burburtay xaafad ay dadku ku badan yihiin oo ku taal magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo wax yar uun ka dib markii ay duushay Axadii Maanta.
Diyaaradda dhacday waxaa laheyd shirkad maxalli ah oo la yiraahdo Busy Bee, waxa ayna ku sii jeeday magaalada Beni oo qiyaastii 250km dhanka waqooyi uga beegan Caasimda dalkaasi ee Kinshasa, sida laga soo xigtay Gudoomiyaha gobolka North Kivu .
Sarkaal katirsan shirkadda Busy Bee oo codsaday in magaciisa aan warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay ku dhinteen 16 rakaab ah iyo labo shaqaale ah.
Shilalka diyaradaha ayaa ku soo badanaya dalka Koongo, maadaama heerka badbaadada caalamiga ah oo aysan laheyn iyo dayactir la’aanta heysata diyaaradaha ka shaqeeya dalkaas ay arrintaasi sabab u tahay.
Shirkadaha diyaaraha rakaabka iyo kuwa Kaargowga oo ay kamid tahay Busy Bee ayaa laga mamnuucay in ay u duulaan dalalka Midowga Yurub.
diyaarad ku burburtay dalka Congo
Shirkadaha dalalka Midowga Yurub